Wararkii ugu danbeeyay ee Saakay laga helaayo Deegaanka garacad oo Alshabaab ay la wareegtay – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Deegaanka garacad ee Gobolka Mudug oo Xalay dagaalyahano hubeesan oo katirsan Al shabaab la wareegeen ayaa sheegaya in Odayaasha Deegaanka iyo Dagaalyahaanadaasi ay kawada hadleen imaanshiyahooda.
Dagaalyahaanada ayaa Saakay iska uruursanaaya qeybo kamid ah Deegaanka Garacad waxaana ay joogaan meel u dhow xeebta oo bariga ah mana jirto cid ay wax u gaysteen xalay sida aan Wararka ku heleyno..
Dagaalyahaanada ayaa Odayaasha Deegaanka u sheegay inay doonayaan inay kasii gudbaan deegaanka ayna nabad galyo kula joogayaan mudada ay ka gudbayaan kooxdan Shabab ka tirsan ayaa wali aan xeebta doonyahooda ka furan.
Maamulka Degmada ayaa sidoo kale sheegay in Dagaalyahaanadaasi ay ballanqaaden inay kasii baxayaan Deegaanka walow aan maamulka naftiisa loo sheegin halka ay kaga sii gudbi doonaan deegaanka garacad.
Deegaan u dhow garacad ayaa waxa ay wararku sheegayan inay shalay ka dageen dagaalyahanada Al-Shabaab oo cuno ka raadsadeen halkasi oo lagu arkay raadkooda .
Doonyaha ay wataan Dagaalyahaanadaani Shabaab katirsan ayaa lagu soo waramayaa in ay kasoo baxeen Xeebta Degmada Xarar Dheere ee Gobolka Mudug, waxa ayna arintan qal qal badan ku beertay maamulka Galmudug oo ka taliya deegaanka ay hada Shabaab la wareegeen.
Xaalada Deegaanka garacad ayaa Saakay ah mid kacsan waxa ayna dadka Deegaanka ka cabsi qabaan in Al shabaabkaani ay kusii sal balaarsadaan Deegaanka uuna dhaco isku dhax dhax mara Al-Shababa iyo ciidamada Puntiland..